Banky SG Madagasikara: « Pack » efatra vaovao ho an’ny mpanjifa | NewsMada
Banky SG Madagasikara: « Pack » efatra vaovao ho an’ny mpanjifa
Manavao ny tolotra omena ny mpanjifa ny banky Société générale (SG) Madagasikara.
Mahazo tombony maherin’ny 60% miohatra amin’ny mpanjifa tsotra ireo mampiasa ny tolotra mikambana maromaro « pack ». Miisa efatra izy ireo, ho an’ny karazana mpanjifa isan-tsokajiny. Voalohany, natao ho an’ny tanora manomboka 14 taona ny tolotra « pack Zen », ahitana fitaovana informatika « application mobile connect”, karatra visa Varongy, sy zavatra mahaliana maro. Faharoa, hanamora ny fitantanana ny filan’ny mpanjifa mikasika ny raharaha amin’ny banky ny « pack Eco ». Ahitana ny tolotry ny SG Madagasikara rehetra, azo ampiasaina amin’ny fikirakirana ny vola Soaihany, ahafahana maka mialoha ny ampaham-bola amin’ny karama. Maherin’ny 10 ny azo ampiasana ny « pack Eco » arakaraka ny filan’ny mpanjifa sy ny tsy ampoizina.
Fahatelo ny « pack Confort », ahitana ny tolotra rehetra ahitana ny vokatra miisa enina raitra omen’ny SG Madagasikara. Anisan’izany ny karatra Ebène Classic, ny « application mobile connect », ny Messalia, ahafahana mamantatra ny toe-bola sy ny fikirakirana ny vola, miampy ny fiarovana manokana ny volan’ny mpanjifa, ny « Soatony Quietis plus » sy ny fiantohana ho an’ny dia aleha, raha sendra misy entana very, fitsaboana, sns.
Farany ny « pack Ebène Or », tolotra ambony indrindra avo lenta. Mahazo tombondahiny manokana ny mpanjifa, tsy mila milahatra, azo antoka ny karatra sady azo ampiasaina hividianan-javatra amin’ny “internet”, be ny vola azo alaina isan-kerinandro, sns.